Vaovao - Tombony ho an'ny Stabilizer Ca Zn
Amin'izao fotoana izao, ny stabilisatera hafanana PVC dia misy ny sira mitarika, ny kalsioma mitambatra ary ny zinc, ny firafitra biolojika, ny antimony biolojika, ny stabiliseran'ny hafanana fanampiny organika ary ny vongan-tany tsy fahita firy. Ny vokatra lehibe indrindra dia ny stabilizer masira nentim-paharazana sy ny stabilizer Ca Zn.
Ca Zn stabilizer dia maitso ary sariaka amin'ny tontolo iainana tsy misy singa vy mavesatra, toy ny firaka sy ny mpampisaraka, afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fenitra fiarovana ny tontolo iainana farany any amin'ny firenena isan-karazany.
Ca Zn stabilizer dia mahatohitra ny fandotoana volo-volo. Ca Zn stabilizer dia manana toetra mampiavaka ny fifanakalozana rafitra.Raha ny stabilizer nentin-drazana nentina nentina nentina nentina niova ho lasa organotin thermal stabilizer dia hitranga ny fandotoana hazo fijaliana, ka miteraka fiakaran'ny vidim-piainana avo, raha toa kosa ny stabilizer Ca Zn tsy mihetsika amin'ireo heat roa ireo stabilizers, ary ny vidin'ny switching dia ambany.
Ny hakitroky ny stabiliser Ca Zn dia ambany, ary ny habetsahan'ny calcium carbonate dia azo ampitomboina araka ny tokony ho izy mba hampihenana ny vidiny. Raha ampitahaina amin'ny stabilizer heat heat lead, ny hakitroky ny stabilizer Ca Zn dia manodidina ny 40%.
Aimsea dia nasionaly teknolojia avo lenta orinasa manokana amin'ny fampidirana ny fikarohana, famokarana ary ny varotra ny tsy misy poizina tontolo iainana namana stabilizers.
Fotoana fandefasana: Oktobra-27-2020
Pvc Additives, Pvc One Pack Stabilizer, Pvc Heat Stabilizer, Pvc Stabilizer, Pvc Heat Stabilizer ho an'ny Flexbile, Stabilizer tsy misy poizina Pvc,